Ny atiny rehetra hofafantsika avy amin'ny Google Drive dia hofongorana ho azy afaka 30 andro | Androidsis
Ny fitoeram-bokatra dia iray amin'ireo famoronana lehibe sy tsara indrindra amin'ny informatika, fitoeram-bokatra azo ampiasaina izay misy koa serivisy rahona ankoatry ny rafitra miasa amin'ny birao. Ny fitoeram-bokatra dia mamela antsika hamerina ireo rakitra izay nofafantsika nandritra ny 30 andro farafaharatsiny raha tsy hoe nofoananay amin'ny tanana.
Raha ny momba ny Google Drive, isaky ny mamafa ny fisie isika dia manjary ao anatin'ny Fako avy amin'ny kaontinay, fibodoana toerana iray azontsika ampiasaina hitahirizana atiny hafa. Fa tsy ho toy izao mandrakizay, satria hatramin'ny 13 Oktobra dia hiova ny asany.
Google dia nanambara fa hatramin'ny 13 Oktobra, ny atiny rehetra izay nalefa tany amin'ny fako kaonty Google Drive, hofafana ho azy aorian'ny 30 andro, amin'ny fotoana nametrahan'ny Windows sy macOS tsy misy hatak'andro. Araka ny hitantsika amin'ny bilaogy Google:
Ny fihetsika voalaza etsy ambony dia nahatonga ny fako ho "tazomina mandritra ny fotoana tsy voafetra" mandra-pamafan'ny mpampiasa maharitra. Ka na dia niafina aza dia nanisa hatrany ny drafitra / fetra fitehirizana.
Mba hahafantaran'ny mpampiasa rehetra ny fiasan'ny fako Google Drive vaovao, dia nanisy a fampandrenesana amin'ny app amin'izay ny mpampiasa tsy mahazo mahagaga tsy ampoizina mandritra ny fampiasana azy.
Mitovy ny fiasan'ny fako na inona na inona fitaovana ampiasaintsika, koa raha mandefa rakitra mankany amin'ny fako avy amin'ny finday avo lenta isika na amin'ny alàlan'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny browser, dia ho hita mandritra ny 30 andro vao sitrana. Aorian'ireo 30 andro ireo dia hofongorana ho azy ny rakitra ary tsy ho azo averina indray raha tsy mitahiry kopia voafafa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny atiny rehetra hofafantsika avy amin'ny Google Drive dia hofongorana ho azy afaka 30 andro
Azo alaina any Espana izao ny Moto G9 Plus amin'ny vidiny 269 euro